Madaxweyne Ku xigeenka Puntland oo magaalada Qardho ka dhagax dhigay Waddooyin Laami ah. – Puntlandtimes
Madaxweyne Ku xigeenka Puntland oo magaalada Qardho ka dhagax dhigay Waddooyin Laami ah.
June 12, 2019 Abdurahmaan Editor
Kusimaha Madaxweynaha dowladda Puntland, Ahna Madaxweyne Ku-xigeenka Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa magaalada Qardho ka dhagax dhigay laba waddo oo laami ah iyo deyr wayn oo laga dhisayo aagga dowladda Hoose ee Qardho.
Dhagax dhiggaa waddooyinkan waxaa Madaxweyne Ku-xigeenka ku wehelinaayey Wasiirku Ku-xigeenka Arrimaha Gudaha, Guddoomiyaha gobolka Karkaar, Duqa degmada Qardho, Agaasimaha guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Madaxa Mashruurca JPLG iyo masuuliyiin kale.
Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsanyahay inuu Qardho ka dhagax dhigo Mashaariic Horumarineed, gaar ahaan waddooyin laamiga ah oo bilic iyo horumarba kusoo kordhindoona magaalada Qardho.
Sidoo kale Madaxweyne Karaash ayaa u mahadceliyey shacabka iyo maamulka degmada Qardho oo uu ku tilmamaay inay yihiin dad fahmay sida mashaariicda looga faa’iidaysto, isla markaana sanad walba ay galaan kaalinta kowaad, waxaana uu kula dar-daarmay inay halkaasi kasii wadaan.
Kusimaha Madaxweynaha ayaa u mahadnaqay cidkasta oo ku howlan horumarka Puntland, waxaa sidoo kale uu mahadceliyay hay’addaha caalamiga ah ee gacanta ka gaysta mashaariicda dalka ka socda.
Kusimaha Madaxweynaha Puntland ayaa Madaxtooyada Qardho kulan kula yeeshay maamulaha mashruuca hormarinta degmooyinka ee JPLG Mr Mark , kulankaasi oo xubno dowladda ka tirsan ay ku wehliyeen, waxaa looga wada-hadlay sidii loo dar-dar gelinlahaa mashaariic horumarineed ee ka socodka degmada, isla markaana xilligan hay’addaha Caalamiga ah ay kaalintooda uga gaysan lahaayeen wax ka qabashada bur-burka ku yimid waddooyinka dalka.
Reer Qardho waxa idin saran wajib gar ah kaas oo aad wada garanaysan qofkasta oo kamid ah dadka meshan udhashay waxa lo bahan yahay in uu xil iska saro qurxinta & dhismaha horumarinta magalada Qardho.